राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको कार्यकाल आज सकिँदै
On: २०७६ फाल्गुन २० गते, मंगलवार, ०९:३१ बजे प्रकाशित
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको कार्यकाल आज सकिँदैछ। राति १२ बजेदेखि उनीहरूको कार्यकाल सकिन लागेको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पुनःनियुक्तिका लागि सिफारिस नगरे अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकाल पनि आजै रातिदेखि सकिनेछ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको भए दिउँसोसम्म जानकारी आउने नभए उहाँको पनि सांसदको कार्यकाल आजै राति १२ बजेदेखि सकिने जनाइएको छ। आज कार्यकाल सकिने सांसदहरुमा नेकपाका नौजना रहेका छन्।
डा. खतिवडा, कमलाकुमारी वली, कालीबहादुर मल्ल, खेमराज नेपाली, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बूढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर र हरिचरण सिवाकोटी रहेका छन्। त्यसैगरी काङ्ग्रेसका दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, बद्रीप्रसाद पाण्डे, सुरेन्द्रराज पाण्डे, धनकुमारी खतिवडा, मुक्ताकुमारी यादव, बिन्दा आले र सरिता प्रसाईको कार्यकाल पनि आजैदेखि सकिँदैछ। राजपाका रमेशप्रसाद यादव र वृषेशचन्द्र लालको कार्यकाल पनि आजै सकिँदैछ। समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासवानको कार्यकाल पनि आजै सकिनेछ।
अन्य सम्बन्धित समाचार: आज मदन–आश्रित स्मृति दिवस
भोलिदेखि राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसका ६ जना मात्रै सांसद रहनेछन्। राजपाका दुई र समाजवादी पाएका एकजना सांसद रहनेछन्। भने बाँकी नेकपाका रहनेछन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा ९ जना मात्रै विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका सांसद रहनेछन्।
यसैबीच आज दिउँसो २ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकअघि नयाँ बानेश्वरमा सामूहिक फोटो सेसन हुने भएको छ। आजदेखि बिदाइ हुने सांसदहरुले आजको बैठकमा आफ्ना धारणाहरू राख्ने तयारी गरिएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नवनिर्वाचित सांसदहरूको भोलि ११ बजे सपथ हुने भएको छ।
२०७६ फाल्गुन २० गते, मंगलवार, ०९:३१ बजे प्रकाशित